Waxaa jiro dad loo balan qaadey lacago iyo xilala muhiim ah sida Raiisulwasaare oo lagu bedeli doono Xasan Cali Kheyre.
Muhiimada loo dhisey Kooxdaan ayaa ah iney badbaadiyaan oo beesha caalamka ay ka gadaan in aanu sharci aheyn in Gudoomiye Mursal Talaabada uu qaadey, waxaana loo kala direy xafiisyada beesha caalamka iney warar deg deg ah ay gaarsiiyaan oo dhegahooda ka buuxiyaan xumaan ah in mursal uu lacag laaluush ah soo qaatay rabana in dalka dib u geliyo dagaal sokooye.
Nolol ayaa waxaa kamid ah
1.Abdi saciid La taliyaha amniga qaranka madaxweynaha , waxaa loo xil saarey inuu wareego xafiisyada ay EU-da ku leedahay Muqdisho iyo inuu dhanbaalo deg deg ah gaarsiiyo xafiisyada kale ee xiriirka nla leedahay dowalda.
2.Samiira Ahmed oo ka shaqeysa xafiiska Xasan Cali Kheyre waxaa loo direy iney warkaan kazoo gado xafiisyada AU.
3.Dr.cumar Calasow oo u shaqeeya Amisom qeybta HR ahna lataliye safiirka Xafiiska Amisom ee xuquuql insaanka waxaa loo balan qaadey dhankiisa inuu noqon doono Raiisul wasaare oo kheyre lagu bedeli doono hadii uu AMISOM si dhab ah uga soo gado arinkaan oo farmaajo bad baado.
4.Jamal Mohamed Hassan wasiirka qorsheynta, waxaa loo direy in Dowlada Mareykanka asna dhegaha war wanaagsan oo farmaajo ah ku shubo kana soo gado in Gudoonka Baarlamaanka ay waalayaan koox nabad diid ah
5.Abdullahi Hamud oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska Xsan Cali Kheyre waxaa loo direy in dowlada UK oo dowlada Soomaaliya in badan iminka aanu isku fiicneyn siyaasad ahaan in uu asagana David Concor kasoo gado in laga qaldanyahay Farmaajo.
Si kastoo ahaato warkaan oo aanu kasoo xiganey mid kamid ah Xubnahaan 5ta ah ee shaqada lo direy ayaa waxaa ayana jawaab ahaan qaarkood loo soo siiyey in sharciga ay u hogaansamaan Farmaajo iyo Kheyre.
Qarax miino oo maanta ka dhacay Isgoyska Xoosh ee Muqdisho
Dowladda oo ka hadashay qaraxa Maanta ka dhacay Muqdisho